မကြာခင် မော်ဒယ်လောကမှာ မြင်တွေ့ ရဖွယ်ရှိတဲ့ ကောင်မလေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Celebrity » မကြာခင် မော်ဒယ်လောကမှာ မြင်တွေ့ ရဖွယ်ရှိတဲ့ ကောင်မလေး
မကြာခင် မော်ဒယ်လောကမှာ မြင်တွေ့ ရဖွယ်ရှိတဲ့ ကောင်မလေး
Posted by GreeNSheeP on Oct 27, 2011 in Celebrity, Facebook, Photography | 27 comments
သူကလေးနဲ့ ဖေ့ဘုတ်မှာ ခင်မင်ခဲ့ရပါသည် ။
သူကလေး ဆိုတာ ၊ နာမည် က အိန်ဒရေ ။
ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူလေး ဖြစ်သည် ။
1993 မွေးသူလေး ဆိုတော့ ၁၈ နှစ် ပြည့်ပြီးဖြစ်သည် ။
သူကလေးက ဟိန္ဒူမလေး ဖြစ်သည် ။
သူကလေး နဲ့ ချက်တင်းထိုင်ရာမှ သူကလေး၏ “ ပြင်းပြသော ရည်ရွယ်ချက်မှာ မော်ဒယ်ဖြစ်ချင်တာ ” ဟု သိလိုက်ရသည် ။
ခက်သည် ။ သူကလေးကို ဘီလ်ဘုတ်ထောင်ရိုက်ရအောင်လည်း ၊ ကိုယ်က ယခုသုံးသည့် အင်တာနက်ဖိုးတောင် မနည်းတွက်နေရတဲ့လူစား ။
ဒီတော့ သူကလေး ၏ အလှဓါတ်ပုံများကို ပြန်လည် ဝေမျှ လိုက်ခြင်းဖြင့် ၊ သူကလေးကို မော်ဒယ်အဖြစ် သုံးမည့် မော်ဒယ်အေဂျင်စီများ ၊ စီးပွားလုပ်ငန်းရှင်များ တွေ့ မြင်ကြစေရန် ရည်ရွယ်လိုက်ပါသည် ။
GreeN SheeP has written 13 post in this Website..
View all posts by GreeNSheeP →
အစ်ကို GreenNSheeP ရေမော်ဒယ်လောက သူထက်သာတဲ့လူတောင် တိုးမပေါက်နေတာဗျ။ ခုခေတ်က တော်တော်များများမိန်းကလေးတိုင်းကို ဖြစ်ချင်တာကို မေးလိုက်တိုင်း မော်ဒယ်ဖြစ်ချင်တာနဲ့ အဆိုတော်နဲ့ မင်းသမီးတဲ့။ တိုင်းပြည်ကို ကျေးဇူးဆပ်နေကြတာလေ။ တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ဇာတ်ကားတွေနဲ့ ပုံတွေနဲ့လေ။ တစ်ချို့တော်တဲ့ ပညာရှင်တွေကလည်း ပြည်ပက လစာကောင်းတော့ ပြည်ပဘဲထွက်တာများတယ်။ ကြုံတုန်းပြောတာပါ ဆိုင်တော့မဆိုင်ပါဘူးနော်။ အဟီးနောက်ထပ် လန်းလန်းတွေရှိရင်မျှအုန်းနော။ အခုပုံတော့ မကြိုက်လို့မကူးတော့ဘူး အစ်ကိုရေ။
ကြည့်တဲ့နေရာအနေအထား ဘိုလိုပြောရင် အန်ဂယ်ပြောင်းကြည့်လိုက်ပါ
ကြည့်လိုက်ပြီ။ ခက်တာက ကိုပေါက်တို့လို အနီအောက်ရောင်ခြည်မစွမ်းဆောင်နိုင်သေးဘူးဗျ။
ခုမှကျင့်တုန်းမလို့ပါ။ ထူးခြားတာကတော့ ချွန်ထွက်နေတာဘဲ နှာခေါင်းလေးပြောတာပါ။
အကိုရေ နောက်တစ်ခါ ဓါတ်ပုံရိုက်ရင် မျက်လုံးကို အသေကြီးမထားပါနဲ့လို့ ….
ကင်မရာကို ကိုယ့် ကိုကြည့်နေတဲ့ လူလို့ သဘောထားပါလို့ ..
မျက်လုံးက သေလွန်းအား ကြီးတယ်ဗျာ …
မျက်လုံးလေး အသက်ဝင်ရင် ပိုကြည့်ကောင်းသွားမယ် …
အင်း အလွန်တရာ ရိုးတယ်ဆိုရင်တော့ စပွန်ဆာက…………………………………
ဟယ် ကိုပေါက် ….. ကြည့်စမ်း ကြည့်စမ်း သိပ်သိနေပါ့လား.
မဟုတ်မှလွဲရော စပွန်ဆာ ကိုပေါက်လားမသိ ….
ဟာရကေး … ဟိန္ဒူကားလားမလေးပေါ့နော်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အကောင်ကြီးကြီး စပွန်ဆာရရင်တော့
ချောင်လည်မှာပါ (စားဝတ်နေရေး ပြောတာပါ)
ပုံမကြည့်ခင် သိုးစိမ်းရေးတဲ့ စာဖတ်လိုက်တာ ကောင်မလေးနာမည် အိန်ဒရေဆိုတော့ နောက်ပြီထင်တာ သူလေးကို တွေ့လိုက်ရမှ ဦးကြောင် အိနြေ္ဒမဆည်နိုင်အောင် သွားရည်တများများ ဖြစ်သွားရတယ်။ အိနြေ္ဒလေးကို ချစ်လွန်းလို့ ဦးကြောင်ငယ်ငယ်ကထဲက နွားသားမစားဘူး.. သိလား..။ ဦးကြောင်ပြောတာ ယုံရင် ဂျီတော့ထဲမှာ ချစ်လိုက်..မှားလို့ ချက်လိုက်ကြရအောင်နော်။ :cops:
ဓါတ်ပုံကိုကြည့်ရတာ အက်ထရက်ရှင် သိပ်မရှိသလိုပဲနော် … ဖော်ထားတာနဲ့ … ဓါတ်ပုံတစ်ပုံ ကြည့်ကောင်းပြီလို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး … ။ အနုပညာဝါသနာပါပေမယ့် … ကိုယ့်မှာ ကိုယ်တိုင်အိတ်စိုက်မလုပ်နိုင်လျှင် အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်ပါဘူး … ။ မဖြစ်နိုင်တာနောက်ကို လိုက်နေရင်း .. ဖြစ်နိုင်တာတွေပါ ဆုံးရှုံးရတတ်ပါတယ် …. ။ တကယ့်ကို ကိုယ်တွေ့ပါပဲ …
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကွန်ဖီးဒန့် ရှိတယ်ဆိုလျှင် အခုပွဲတွေရှိတယ် … ၀င်ပြိုင်ကြည့်ပါ … ဆုတစ်ခုခုလောက်ချိတ်တာနဲက အခွင့်လမ်းတွေ ပွင့်လာနိုင်ပါတယ် … လတ်တလော ပြိုင်ပွဲဆိုလို့ကြားမိတာ …. အော်ရာမင်း အက်ဖ်က ပွဲတခုရှိတယ် … ။
အစ်ကို GreeNSheeP ရေ ကျနော် နဲ့ ဆက်သွယ်ပေးပါလား ကျနော် ရွှေဘို သနပ်ခါး ကြော်ငြာချင်တာ မင်းသမီး မငှားချင်ဘူး ၀ါသနာပါတဲ့ လူငယ်တွေနဲ့ပဲ ရိုက်ချင်လို့ လေးပေါက် ဒီတစ်ခုတော့ လိုက်လျောပေးနော် သားသားငှားလိုက်တော့မယ်
ထူးထူးခြားခြား ထင်းကနဲတော့ ဖြစ်မနေဘူး
နာမည်ရလာရင်တော့ အပြင်အဆင်တွေလည်း တမျိုးဖြစ်လာတော့မှာပေ့ါလေ
မျက်လုံး အရောင်လက်မလက်ဘူးနော်.. ဥပမာ ကင်မရာကို ညို့အားပြင်းပြင်းနဲ့ စိုက်ကြည့်တာမျိုး.. ကင်မရာသမားကို ကိုယ့်ကို စကားလာပြောတဲ့ လူကို ပြန်စိုက်ကြည့်ပြီး ပြောတဲ့ ပုံစံမျိုး… အာရုံ စူးစိုက်ပြီး တည့်တည့် ကြည့်တာမျိုးပေါ့.. နောက်ပြီး မျက်လုံး အနေအထား ခြယ်သ ထားတာနည်းနည်း အရောင်တင်သင့်တယ် နှုတ်ခမ်းနီ အရောင်လေးလည်း နည်းနည်း တင်ပေါ့.. အသားနည်းနည်းတိုးအောင် ပဲနဲ့ နို့တော့ များများ စားသင့်တယ်.. လက်မောင်းတွေက အသားမရှိလို့ အရိုးကြီးပဲ အသားတွေတောင် ချောင်နေတယ်။ ဟိဟိ..
ခေးမလေးက ပင်ကို သဘာဝ အလှ ရှိပါတယ်။ ငယ်တယ် ဆိုတော့ နုတာလည်း ပါတာပေါ့.. ငယ်ဂုဏ်ပေါ့။
စိတ်ထင်တာ လျောက်ပြောမနေနဲ့ ဖွားဆူး။ မြန်မာမော်ဒယ်တွေကြည့်လိုက်ရင် အဆီတထပ် အသားတထပ် (စိတ်ဆိုးနဲ့နော် ကြောင်ကြီးပြောရင် နဲနဲပိုတတ်တယ် ) သူတို့ လက်မောင်းတွေက ခြေသလုံးလောက် ခြေထောက်တွေက ပေါင်လောက်၊ ပေါင်လုံးတွေက ခါးလောက်ရှိလို့ ဦးကြောင် ကိုယ့်ဗလကိုယ်ကြည့်ပြီး စိတ်အားငယ်ရတယ်။ အိနြေ္ဒလေးဆိုက်က အနေတော်ပဲ။ ကြီးသင့်တဲ့နေရာကြီးထားရင် ပြီးတာပဲ။ နော် အိနြေ္ဒနော်…..။
အခုတယောက်က.. အရပ်လည်းရှည်ပုံရပါတယ်..။ ကြွက်သားလေးဘာလေး ထွက်အောင်.. အားကစားတော့လုပ်သင့်တယ် ထင်တာပဲ..။
ဆိုတော့… ကိုရင်သိုး( SheeP) က.. အင်တာဗျူးလုပ်ပြီး Category, Mandalay Gazette > Cover Faces မှာတင်လိုက်ပါလား..။
ရွာသူတွေဆီက.. အနေအထား..ဘာညာ.. အိုင်ဒီယာအကူအညီတောင်းပေါ့..။
ယူအက်စ်က..ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တင်းနဲ့.. ကျောင်းပြီးပြီး.. မြန်မာပြည်ရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်မယ့်.. ရိုက်နေတယ့် လူတွေရှိတယ်..။
သူတို့က.. မြန်မာမိုဒယ်တွေကို.. အမေရိကန်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်နေတာ…။
အခုလို ပါးပါးသွယ်သွယ်.. အသစ်ဆို စိတ်ဝင်စားချင်စားမှာပေါ့…။ ;)
ကျောင်းပြီးမှ သူလေးဝါသနာပါရာကို သူလေး မိဘများက ခွင့်ပြုမှာပါတဲ့ ။
တူလေးကဘယ်ဒူရေးရဲ။ ဓါတ်ရှင်မင်းဒမီးဖစ်ချင်တာလား။ဒါဆိုပြောပေးပါနော်…မြဟင်္သာရယ် ရီပိုရယ် ဖျံသိုရယ် ဆာဒူးကြီးရယ် ကြော်ငြာလေးအတွက်မင်တမီးလိုလို့လို့…..နော်နော်နော်
အနော်ပြည်လမ်းက ဘယာကြော်ဆိုင်လေးအတွက် ကြော်ငြာ ရိုက်ချင်တယ်ဗျို…:P
ကျွန်တော်လည်းအကြံဝင်ပေးမယ် ဒီထက်ဝလာအောင် (ပြည်2)လေးဖြစ်လာအောင် တစ်နေ. ငှက်ပျော်သီး ဖီးကြမ်း အလုံး 50 စားပါလို.. ဟီး
ko r kar says:
ပုံစံလေးကတော့်မဆိုးပါဘူး ဦးလေးတို့အကြိုက်ပေါ့ ဘယ်ပြောကောင်းမလဲ။
ဦးလေးတင်မကဘူး သားသားတို့လည်း အကြိုက်
ဟဲ့ ကလေး ကလေးအရာနေစမ်း ရွေဘိုသား
လူကြီးတွေတောင် ဝေစုမတက် ..(အဲ…မှားလို့)
ဘယ်လို အက်ထ၇က်ရှင် ရှိအောင် လုပ်ရမှန်း မသိပါဘူးဆိုနေမှ
ဟေ့ဟေ့ အကုန်လုံးပြန်ကြတော့။ သူလေးကို ဌားပြီးပြီကွ။ ဖရဲသီးရဲ့ သစ်သီးဆိုင်လေးအတွက် wallpaper ရိုက်ဖို့ ဒါရိုက်တာ ဒေးဗစ်ကင်မရွန်းတောင် မန်းလေးရောက်နေပြီ။လက်လျှော့လိုက်ကြပါတော့။
ကျွေးမှာက cafe JJ မှာနော်
အချိန်က ၉နာရီ ၅၉မိနစ် မှ ၁၀နာရီ ထိ
မေးလိုက်ကြည့်ချင်ပါတယ်……သူများကို စော်ကားတာတော့ဟုတ်ပါဘူး…..မော်ဒယ်ဖြစ်ခြင်တာလား……….စပွန်စာ ရှာချင်တာလားလို့လေ…..ဟဲဟဲ…..:)
”ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ စိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတာ လောကမှာရှိမှာမဟုတ်” အားငယ်မိသောစကားကိုဆိုခြင်းမဟုတ်၊ မိမိအနေထားဟာ ရည်မှန်းချက်ဆီ ရောက်နိုင်/မရောက်နိုင် သုံးသပ်ဖို့တော့ လိုမည်ထင်၊ မဟုတ်က Nyein ပြောသလိုဖြစ်သွားမယ်။
နာမည် နဲ့ နေပုံထိုင်ပုံနဲ့ လွဲနေသလိုပဲနော်
ခုခေတ်က မော်ဒယ်မှန်ရင် ပြနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ သဘောလား
အရင်တုန်းကတော့ အလှူမလုပ်နိုင်ရင် ဈေးရောင်းတဲ့
ခုခေတ်ကတော့ မော်ဒယ်လုပ် ဖြစ်နေပြီလားမသိပါဘူးဗျာ
တစ်ခုတော့လည်းရှိပါတယ် ၀ိုင်းစု သီချင်းထဲကလို ကုသိုလ်ရပါတယ် ပေါ့
သာဓု…သာဓု…သာဓု. ဂလု (အဲ ယောင်လို့)
(မှတ်ချက်-လေးစားထိုက်သော ပြည်သူချစ် အနုပညာရှင်များကို လေးစားပါသည်)
သူဘာသာ ဘာကြီးဖြစ်ချင်ဖြစ်ချင် ဖြစ်ပါစေ လောလောဆယ်ပုံလေးတွေနဲ့ ဦးပေစိတို့ကို ဒါနပြုတာကို သာဓုခေါ်ရမယ်လေ …. ဟုတ်ဗူးလား ဟဲဟဲဟဲ(ကောလိပ်ဂျင်နေဝင်း ရယ်သံဖြင့်ရယ်သည်)